Oovimba abagcina i-EUR / GBP
Udidi: YeEUR / IGBP
Idiphu ye-EURGBP ithenga kuvavanyo olusezantsi lwendlela yokwakha yexesha elifutshane
Ukuhlaziywa: 24 Agasti 2021
Inkxaso ephambili: 0.8545
Inkcaso ephambili: 0.8590
I-EURGBP iyalile into ephezulu yokwakheka kwangoko kwaye yehla -0.60% ukuphinda uzame ukuphakama okuphukileyo kwangaphambili (Jul 27- Aug 2 highs).
Le ntengiso iyarhweba ngaphakathi kwentshukumo eyakhiwe kakuhle yokudala ukwahluka kwe-bullish ukusukela oko i-rally isuka kwiveki ephelileyo ngalo lonke ixesha isonyuka ngaphezulu. Le yiflegi yokuqhubekeka okuqhubayo ukuba kuvavanyo oluphezulu oluphukileyo lubambe njengenkxaso.
Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa sineqela le-fibonacci kweli nqanaba ngexabiso lokuntywila nge-38.2% yoluhlu lweveki ephelileyo kunye ne-61.8% yamaza okugqibela anyukayo. Ukubetha iithagethi zexesha elincinci kwi-161.8% yomlenze wokugqibela (0.8564-0.8594).
Konke oku kudityanisiwe kwenza ukuba kube nokuseta okuphezulu kokuthenga kubuthathaka bomhla odlulileyo.
I-EUR / GBP Swing ephezulu ekuDlalayo!
Ukuhlaziywa: 19 Agasti 2021
Ukunyuka kwe-EUR / GBP okwangoku kubhalwa umqondiso wabathengi abomeleleyo kunye nokuqhubeka okunokubakho kokuqhubeka. Ngethuba elifutshane, liye lehla kancinci ukuzama ukutsala abathengi abaninzi ngaphambi kokutsiba phezulu.
I-Euro ifumene uncedo kwi-Akhawunti yangoku ye-Euro. Isalathi sezoqoqosho sixelwe kwi-21.3B xa kuthelekiswa ne-12.3B ekulindelweyo kwaye kuthelekiswa ne-13.9B kwixesha lokwenza ingxelo elidlulileyo.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / GBP!
I-EUR / GBP iyonyusa nangona iyehla okwexeshana. Iqinisekisile ukwenyuka kwenkungu emva kokubhalisa ukonakala okungaphantsi komgca ophakathi (LML). Ukusilela ukubuyela kuvavanyo kwaye uphinde uzame kwakhona i-LML ityikitye intshukumo ebanzi ebheka phezulu.
Ngokobuchwephesha, umgca we-pitchfork ophakathi (ML) ubonwa njengethagethi ephezulu, umqobo omkhulu. Asinakho ukubekela ecaleni ukwehla okuncinci emva kwereali yangoku. I-EUR / GBP ibalekile kwiflegi encinci, ukuze ibuye kuvavanyo kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ikhule.
I-EURGBP ngandlela thile kulindeleke ukuba inyuke kwixesha elizayo emva kokuqinisekisa ifolokhwe eyenyukayo nasemva kokuba isilele ukubuya ukuzama kwakhona umgca ophakathi (LML). Indawo ephezulu ephezulu ibonisa abathengi abomeleleyo.
tags YeEUR / IGBP, Forex, Forex Analysis Technical, ukuseta urhwebo
Ukuqhawuka kwe-EUR / GBP kubonakala kuqinisekisiwe!
Ukuhlaziywa: 9 Julayi 2021
I-EUR / GBP yehle kancinci kwitshathi ye-H1 ngexesha lokubhalwa ukuzama ukubuyisela amanqanaba enkxaso (ukumelana kujike kwaba yinkxaso). I-bias i-bullish kwixesha elifutshane emva kokuqhekeza ngaphezu komgca we-downtrend.
Esi sibini ngandlela thile kulindeleke ukuba sonyuke emva kwedatha yase-UK ehluphekayo exelwe namhlanje I-GDP inyuke kuphela nge-0.8%, xa kuthelekiswa noqikelelo lwe-1.5%, iMveliso yezoShishino ibhalise ukukhula kwe-0.8%, ngaphantsi kwe-1.3% kulindelwe, ngelixa iMveliso yezeMveliso yehle nge-0.1%, nokuba iingcali zilindele ukubona ukukhula kwe-0.9%.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-EUR / GBP H1!
I-EUR / GBP iyavavanya kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziselwe ukuvavanya. Ibekwe ngaphezulu kwenqanaba le-pivot point (0.8584) yenqanaba leveki. Ukuhlala ngaphezulu kwala manqanaba kungazisa amandla aphakamileyo.
Okwangoku, sifuna ukuqinisekiswa ngaphambi kokuhamba ixesha elide. Ngokobuchwephesha, ukuphakama okuphezulu okuphezulu kunokuthi kusebenze ukukhula okunokubakho kwi-0.8615 static resistance.
Ukwehla kwangoku kunokuba kwexeshana I-EUR / GBP ibuyile ezokuvavanya kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziselwe. Ukutsiba kunye nokuvala ngaphezulu kwe-0.8596 ephezulu yanamhlanje kunokuzisa ithuba elide.
tags YeEUR / IGBP, EURGBP, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo
I-EUR / GBP Icala elingavumelekanga!
Ukuhlaziywa: 19 May 2021
I-EUR / GBP ithengisa kwindawo eluhlaza ngeli xesha lokubhala kodwa inokuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe emva kokuphinda iphinde ibuyele kwinqanaba leveki. Iponti inokuphinda ikhokele ngokukhawuleza xa imali ihlala yomelele.
Idatha yokunyuka kwamaxabiso e-United Kingdom ihambelane nokulindelwe ngaphambili. I-CPI inyuke nge-1.5% ngo-Epreli njengoko bekulindelekile ukubetha ukukhula kwe-0.7% ngo-Matshi, ngelixa i-Core CPI inyuke nge-1.3% elindelweyo. I-UK HPI kunye ne-PPI Input zingene bhetele kunokuba bekulindelwe, ke iPound inokuphinda iqale ukuxabisa.
Uhla lwe-EUR / GBP H4 Chart technical Analysis!
I-EUR / GBP ithengiswa kwi-0.8619 ngaphantsi kwenqanaba le-pivot yeveki (0.8621). Ibhalise kuphela uqhawulo lobuxoki ngaphezulu kwenqaku le-pivot, ke isibini sinokuqalisa ukwehla kwakhona.
Olunye uqhawulo lobuxoki okanye ukwaliwa kunokubonisa ukuba iinkunzi zidiniwe kwaye iibhere ziya kuthatha ulawulo olupheleleyo. Ngokobuchwephesha, i-EUR / GBP ifumene inkxaso engezantsi komgca ophakathi ophakathi (lml) wefolokhwe yokunyuka.
Ukophuka okusebenzayo okukhoyo ngaphantsi komgca ophakathi (lml) kuya kuqinisekisa ukwehla okunzulu. Ndiyakholelwa ukuba kuphela kukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwepivot yeveki (0.8621) enokuthi isebenzise imeko ye-bearish.
Olunye uqhawulo lobuxoki ngaphezulu kwepivot yeveki elandelwa sisezantsi esisezantsi, ukuhla ngezantsi kwe-0.8609 kunokubonisa ukwehla okunokubakho ngezantsi komgca ophakathi ophakathi (lml). Ukulahla kunye nokuzinzisa phantsi komgca ophakathi ophantsi kunokubhengeza ukuthengisa okuqinileyo.
tags i-eur, YeEUR / IGBP, EURGBP, IPELA, Uhlalutyo Technical, Ukunyuka kwamaxabiso e-UK
I-EUR / GBP ihlala iRangebound ngaphambi kweVeki egcwalisiweyo yoMsitho
Ukuhlaziywa: 15 Matshi 2021
I-EUR / GBP igcine icala elijonge kwicala lokurhweba kwanamhlanje ngaphandle kwezinto ezininzi ezixhasayo kumacala omabini.
Imithombo yeendaba yase-UK ibhengeze kwimpelaveki ukuba i-UK inganakho ukubonelela umntu omdala okhulelweyo kugonyo lokuqala ngoJuni 10, kwiiveki ezimbalwa ngaphambili kwithagethi karhulumente.
Okwangoku, irhuluneli yeBhanki yaseNgilani, u-Andrew Bailey, wenza intetho engalindelekanga kufutshane nesigqibo senqanaba le-BoE. Irhuluneli ibinethoni yokuzibandakanya ngokubhekisele kumathemba oqoqosho lwase-UK kunye nokujongela phantsi amaxhala okuba ukunyuka kwamaxabiso kunokunyuka ngaphezulu kwe-2% yebhanki.
Kwezinye iindaba, iBhanki eNkulu yaseYurophu (i-ECB) kutshanje ikhuphe idatha yokuthengwa kweeasethi veki nganye ebonisa ukuba, i-net-net, ukuthengwa kweeasethi zebhanki inyuke yaya kwi-14 yezigidigidi zeerandi ukusuka kwi-12 yezigidigidi ukusuka kwiveki ephelileyo.
I-ECB iqaphele kwiveki ephelileyo ukuba izakonyusa isantya sokuthengwa kwayo kakhulu kwikota ezayo, abanye babahlalutyi bezoqoqosho besithi ukuthengwa kwenyanga kunganyuka kube yi-100 yezigidigidi ukusuka kwi-60 yezigidigidi zeerandi ngoFebruwari.
I-EURGBP-Itshathi yeeyure ezi-4
Abarhwebi be-EUR / GBP ukuba baThathe imikhondo yeNtengiso kwiZiganeko zangoLwesine
Amanani okuthenga anamhlanje ayephantsi ngokudanisa, ukutsho nje okuncinci. Nangona kunjalo, uMongameli we-ECB uChristine Lagarde ulumkise malunga nesiphumo esinje kwinkomfa yoonondaba yeveki ephelileyo.
Oko kwathiwa, kugxilwe kutshintshile kwidatha yeveki ezayo, njengoko abathathi-nxaxheba beemarike balindele ukuthengwa kwenetha okungenani i-20 yezigidigidi.
Ukuqhubela phambili, ukuguquguquka kwamaxabiso e-EUR kule veki kuya kuba nefuthe kwisibhengezo sezimvo ezivela kumagosa aphambili e-ECB ngoLwesine, ngelixa abathengisi be-GBP beza kuthatha imikhondo kwisigqibo senqanaba le-BoE ngoLwesine ngokunjalo.
tags BOE, ECB, EURGBP, Forex
Iibhokhwe ezimbini ze-EURGBP
Ukuhlaziywa: 11 Matshi 2021
Inkxaso ephambili: 0.8555
Ukuchasana okuphambili: 0.8600 - 0.8675
Ukujonga ixesha elide
I-EURGBP ibikwimarike ye-bearish eyomeleleyo kuba yaqhekeka nenqanaba lenkxaso le-0.8870. Eli nqanaba ligcinwe njengenkxaso yeentsuku ezingama-250.
Rigot ngoku siphinda sisebenzise inqanaba eliphambili elilandelayo kwi-0.8550
Uhlalutyo lweTshathi ye2H
NgoLwesithathu ophelileyo iibhere zithathe amaxabiso ezantsi ukuphinda zisebenzise eli nqanaba emva kolawulo ngaphezulu kwenyanga kwi-380 pip bearish yokukhwela ukusuka ku-0.8850 breakout.
Apha kulapho abathengi babekwa khona kunye nexabiso elihlanganisiweyo leepips ezili-190. Oku koko wehla waya retest kwakhona tye phambi pop of iipete malunga 20. Oku kuzantsi kabini lithuba lethu lokuthenga ngomngcipheko olungileyo wokufumana umvuzo.
Sibona ukwahluka okuqinileyo okushicilelweyo.
Iphawundi iphantsi ngokuchasene nabo bonke ubungangamsha
Ukuhlaziywa: 5 Matshi 2021
Inkxaso ephambili: 0.8593
Ukuchasana okuphambili: 0.8720 - 0.8535
Ukusukela kumanqanaba aphezulu ngo-December i-Pound iqokelele i-7.5% ngokuchasene ne-Euro (-7.50% yokuhamba kwi-EUR / GBP) kwaye kwiveki ephelileyo iyalile inqanaba le-0.8550 eyindawo enkulu yokuchasana yajika inkxaso ukusuka ngoMeyi 2020.
Uhlalutyo lweTshathi ye1H
Ixabiso liyarhweba ngaphakathi kwilahleji ewayo ingezantsi kwepivot yeveki kwaye eli khandlela le-1H ligubungele amakhandlela okugqibela ayi-6 1H ngokunyakaza okuthe kratya okuphula umgqomo.
Iphawundi iwela ngokuchasene nazo zonke iimali eziphambili (i-GBP / USD -0.55%). Ukudipha kwiPound kudale intshukumo ye-bullish kwi-EUR / GBP yokuphinda ubenako ukuphakama kweeveki eziphezulu.
I-EURGBP ibhampa kwiminyaka emininzi ephantsi
Inkxaso ephambili: 0.8549
Inkcaso ephambili: 0.8640
I-EURGBP ihambile yehla nge-8.25% ukusuka nge-9 kaSeptemba ye-2020 indawo ephezulu kakhulu. Le ntengiso ayinasakhiwo kodwa amanqanaba aphambili ahlonitshwa kakhulu.
I-EUR / GBP iyalile inqanaba lenkxaso yeminyaka emininzi (0.8550) eyasinika ukusekwa kokuthenga kurhwebo olunokwenzeka oluninzi.
Kwakukho iintetho malunga nokuphakamisa isithintelo e-UK kwangoko namhlanje ethe yatyhala iPound kwaye kwimeko ye-EUR / GBP le nyuselo iphambili kwiPound yatyhala esi sibini phantsi malunga ne-3/4 yepesenti! UKUHAMBA okukhulu kwiintsuku zakudala namhlanje.
Le ntshukumo iyala ngokucacileyo inqanaba lethu eliphambili elijikeleze i-0.8550 kwaye sagqiba kwelokuba sitsibe ixesha elide ekutsaleni kokuqala.
Sisengaphakathi kwesakhiwo esomeleleyo kakhulu phakathi kwexesha eliphakathi kodwa idatha eneempembelelo eziphezulu yokuxabisa i-GBP yomelele ngokwaneleyo ukuba ingaphula eli nqanaba lonyaka.
Side kwaye silawula indawo yethu yokuthenga ngomsindo kuba sithengisa ukubuyela umva kwintengiso ekubonakala ukuba inolawulo.